Somali News 09.15.21 | KWIT
Heerka fiicnaanta imtixaanka ayaa in ka badan labanlaabmay saddex toddobaad gudahood heerka hadda jira oo ah 14.5%.
Tallaalada ayaa kor u kacay .5% boqolkiiba. Isbitaallada la dhigto toddobaad ilaa toddobaad oo loogu talagalay bukaannada la dagaallamaya COVID-19 kaligood ayaa deggan.
Kiisaska ayaa ku soo kordhay saldhigga Iowa inta lagu gudajiray isla waqtigaas in ka badan 50%, iyo gelitaanka isbitaalka ayaa sidoo kale kordhay, oo ay ku jiraan bukaannada u baahan daryeel degdeg ah.
Warbaahinta Dadweynaha Siouxland waxay la xiriirtay xarumaha caafimaadka ee waaweyn ee Magaalada Sioux si wax looga qabto welwelka dadweynaha ee ku saabsan boosaska bukaannada.
Afhayeen u hadlay UnityPoint Health-St. Lukes wuxuu leeyahay isbitaalku wuxuu qaabilaa bukaanka.
Madaxweynaha MercyOne Siouxland wuxuu leeyahay codsiyada wareejinta ee xarunta caafimaadka waxaa loo tixgelinayaa xaalad-kiis.
Dhagax -dhigga Xarunta Cusub ee Fulinta Sharciga ee Degmada Woodbury ayaa ka dhacday goobta dhismaha ee 28th Street dhinaca woqooyi ee Magaalada Sioux.
Codbixiyeyaashu waxay oggolaadeen in mashruuca lagu kharash gareeyo lacag ka badan $ 50 milyan. Saraakiisha ayaa sheegay in qarashka uu gaaray 65 milyan oo doolar. Guddiga degmadu wuxuu qorsheynayaa inuu $ 15.6 milyan ku bixiyo lacagta gargaarka COVID-19 ee Federaalka si loo daboolo gaabiska.
U -doodayaasha ka soo horjeeda in lacagta xabsiga loo adeegsado waxay gacan ka geystaan ​​mudaaharaad nabadeed oo ka dhaca munaasabadda.
Waxay rumeysan yihiin in lacagta loo isticmaalo in lagu caawiyo dadka uu saameeyay Faafa.